Bulchiinsii Magaalaa Minisootaa,USA Aadaa fi Eennummaa Oromoo Jabeessuuf Jedhee Karaa Tokko Oromo Street,Karaa Oromoo Jedhee Moggaase
Amajjii 15, 2015
Oromoo street jedhanii moggaasuuf yaada ummataallee caqasan
Dubbiin MN keessatti maqaa Oromootiin karaa moggaasuuf murteessan tun qaraa akka yaadaatti dhiyaatte eegee koree bulchiinsa magaalaa irra maraa dhuftee Ammajii 12,2015 yaada ummataalle irratti caqasan.
Yaada kanaan duubatti ammoo Koomishiini Karoora magalaa Minniyapoolis yaada kana fudahtee akka Oromoo MN keessatti maqaa ufiitiin karaa aragattu murteesse.
Karaan Oromo street jedhan kun 4th Street South Cedar Avenue fi 15th Avenue South jedhan jiddu jiru kun MN wadhakkaa jira karaa gugurdaatti itti wal qaxxaamuraa Ebla keessa eebbisiiuuf qophi jiran.
karaa maqaa Oromootiin moggaasuuf walii galan
​Namii akka Oromootiin maqaa moggaasan yaada dhiyeesse, Miseensa Mana Marii bulchiinsa magaalaa Minniyapoolis,Abdii Warsameeti.
Qooda Oromoon magaalaa tana keessaa qabaniif galateeffachaa, biyya itti horanii ijoollee itti guddifatan keessaa akka qoodallee qabaatan tolchuuf jedha.
“Ani ummataa Afrikaa hedduu bakka bu’ee hojjadha.MN keessa ummata Afrikaa hedduutti jira.Ummata Afrikaa ani bakka bu’u gugurdaa keessaa tokko Oromoo. Ummati kun aanaa anii jiraadhu, naannoo Brooklyn fi MN gama gamaan keessa jiraata.Aadodo jaarrolee Oromoo,ijoolle kahimaa fi nama akka akkaatiin wal mari’adhu fedhii isaanii arge.”
Fkn akka miseensa mana marii kanaati biyya cufa keesatti sabii toko qooda biyya sunii keessaa qabaatu qaba.
Miseensa Mana Marii magaalaa Minniyapoolis,Abdii Warsamee
​London,USA fi biyya hedduutti naannoo maqaa sabaatiin yaamanaitit jira
“Namii maqaan Oromoo MN keessattti barreefamu arge, Oromoon eennummaa Oromoo, seenaa Oromootii fi waan Oromoo hedduu beekaaf.”
Woma taateefuu karaan maqaa Oromootiin moggaasan kun akka jecha Miseensa Mana Marii bulchiinsa magaalaa Minniyapoolis Abdii Warsameetti yoo cabbiin MN dabarte gara ji’a lamaa sadiin duubatti akkuma hawaasii Oromoo MN fedhetti eebbissiisani hujii jalqaban.Akkamit ulfeessnai eebisiisan jennaan
“Ijoollee,jaarrolee fi maatii walti yaamanii eebbisiisan.”
Miseensii Mana Mari magaalaa Minniyapoolis bara 2013 keessa nama bara dheeraa fi miseensa mana marii magalaa Minniyapoolsii tahee hojjachuu bahe, Robert Lilligreen moo’ee hojjachuutti jira.
Paarti Abdii, DFL,Democratic Farmor Labor Party jedhan paarti Demokiratik waliin hojjatan.
Paartii tun MN keessati guddo beekamti. Paartii tana keessaa bulchoota zoonii MN sadii,Senetii USA afurii fi bakka buutota USA sadiitti filame. Paartii MN seera baaftu hedduu paartii tana keessaa filaman.Warsameen abbaa warraatii intala dubraa tokkoo qaba.
Itti gaafatamaa Hawaasa Oromoo MN,Obboo Hassan Huseeniif ammoo Oromoon MN keesstti maqaa ufiitiin karaa argachuun gammachuu akka inni aadaa isaa dabalee guddifatu tolcha.
Koree bulchiinsa magaalaa Minniyapoolis,bara 2014 keessa
Gama kaaniin ammoo bulchiinsii Magaalaa Minniyapoolsi Somaalleellee MN keessatti Somali Street jedhee maqaa isaaniitiin karaa moggaase.
Bulchiinsii magaalaa Minniyapoolis karaa MN keesatti Oromoo kenne kana gaafa cabbiin dabarte eebbisiisuuf qophii jira.
MN-tti maqaa Oromootiin karaa moggaasan